मेवाकाे फाइदा मात्रै जान्दै आएका छाै तर, मेवाले सबै अवस्थामा फाइदा गर्दैन, बेफाइदा पनि गर्छ - ज्ञानविज्ञान
मेवा, जो सर्वप्रिय फल हो । स्वास्थ्यका लागि यो अति हितकार मानिन्छ । त्यसैले त उखान बनाइएको छ, ‘सेवा गरे, मेवा मिल्छ ।’ अहिले बजारमा मेवा उपलब्ध हुन थालेका छन् । मौसमी फलफूल खोज्नेहरुको लागि यो उपयुक्त रोजाइ बन्नसक्छ ।
म्याग्नेसियम, पोटासियम, नियासिन, प्रोटिन तथा क्यारोटीनयुक्त तथा डायटरी फाइबरले भरिपूर्ण मेवा शरीरको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।
तर, मेवाले सबै अवस्थामा फाइदा गर्दैन, बेफाइदा पनि गर्छ । आयुर्वेदका अनुसार केही विशेष अवस्थामा मेवाको सेवनले शरीरलाई फाइदा गर्नुको सट्टा उल्टै हानी पुर्‍याउन सक्छ । तर त्यो अवस्था कति बेला सिर्जना हुन्छ ? मेवा कुनबेला खाने, कुन बेला नखाने ?
गर्भवतीले नखाने ?
स्तनपान गराउने महिलाले खानबाट बच्ने
उच्च रक्तचापको औषधीसित खाना खानु खतरनाक
पेट खराब भएमा
मुटु सम्बन्धि समस्या
दिनभरमा एक कप भन्दा बढी मेवा खानु हुँदैन । अन्यथा यसले घाँटीलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।
Don't Miss it मैदाको रोटी र पास्ताले हुन सक्छ मानसिक समस्या जानिराखाैँ
Up Next आफ्नाे शरीरको बनावट अनुसार कस्तो खानपान ठिक ? जान्नुहाेस्
किन लगाउने मेहन्दी ? मेहन्दी लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
साउनको सौन्दर्य सूचक हो मेहन्दी र हरियो चुरा । खास गरी महिलाले साउन महिनाभरि हातमा हरिया चुरा र मेहन्दी लगाउँछन्…